शुक्रबारः शुक्रबारको दिन गायन ,मणि , रत्न , हिरा , सुग न्ध , बस्त्र , उत्साह , अलंकार , बाणिज्य , व्यापार , गाइ ९बस्तु किनबेच गर्नु , द्रव्य भण्डारण गर्नु र संचय गर्नु तथा कृषि कार्य शुभ मानिन्छ ।
शनिबारः यस दिन सुरुवात गरिएका हरेक कार्यमा शनि देव को ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ। शनिबार झुटो बोल्नु , ठगि गर्नु , कपट गर्नु , गृह(प्रवेश), स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कल कार खानाको उत्घाटन , फलाम , तरवार आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिने गर्छ । (gnewsnepal बाट सभार)
गहिरो श्वास लिनुका यस्ता छन् फाइदाहरु !!
जुका–चुर्नाले सतायो भने खानुहोस् यी ६ खानेकुराहरु !!